သတင်း - ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ Flood Light ၏လျှောက်လွှာ
ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ Flood Light ၏အသုံးချမှု
ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသောမီးလုံးများ၊ အိမ်မီးများ၊ အပြင်မီးအလင်းရောင်များသည်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်ရှုခင်းအလှဆင်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသောမီးလုံးများကို ဦး ဆောင်ခဲ့တာများပါတယ်။ LED ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသောရေမီးများသည်အိမ်များတွင်အသုံးပြုသောပြင်ပအလင်းရောင်မီးလုံးများဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ပင်ကိုယ်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့် LED အလင်းအရင်းအမြစ်၏ကြာရှည်ခံမှုကိုအဆုံးသတ်ရန် LED ၏နိမ့်သောအပူထုတ်လုပ်မှု၏လက္ခဏာများကိုအသုံးပြုသည်။ ဘက်ထရီသည်အားအပြည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်းနှောင်းပိုင်းတွင်တည်ငြိမ်တောက်ပမှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။ LED module ၏ထိရောက်သောအပူဖြန့်ဖြူးမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အပူဖြန့်ပစ္စည်းများကိုမီးအိမ်များတွင်တပ်ဆင်ထားသည်၊ အသုံးပြုမှုတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်းများ၊ ရေနံ၊ မီးရထားလမ်းများ၊ ရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ Professional led ပေါက်ကွဲမှုကိုသက်သေပြနိုင်သော lightlight Professional led ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ floodlight သည်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၏အမြင်အာရုံလိုအပ်ချက်များနှင့်အလင်းရောင်ပစ္စည်းအခြေအနေများလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီရန် high bay light ၏ရောင်ပြန်သည်အလင်းဖြန့်ကျဲရန်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်များကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သင့်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦး ဆောင်သောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံမီးများပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦး ဆောင်သောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံမီးများ၊ ယေဘူယျအားဖြင့်မီးလုံးများအားအလုပ်မျက်နှာပြင်၏အထက် (သို့) ဘေးနံရံများပေါ်တွင်အညီအမျှတပ်ဆင်ထားသည်။ ပါဝါမြင့်ပေါက်ကွဲစေသောမီးဒဏ်ခံနိုင်သောဓာတ်မီးများနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသောမီးလုံးများကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်။ အလင်းမီးချောင်းများ၊ ပြင်းထန်သောဓာတ်ငွေ့များလွှတ်ပေးသောမီးချောင်းများသို့မဟုတ်မီးချောင်းမီးချောင်းများများစွာပါ ၀ င်သည်၊ ပို၍ စွမ်းအင်ချွေတာရေးပါဝါမြင့်ပေါက်ကွဲစေသော LED ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောမီးလုံးများရှိသည်။
LED ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသော floodlight သည်တောက်ပသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော highlight ဖြစ်ပြီး ၄၀၀W အထိစွမ်းအားရှိသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော high-light ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောမီးလုံးများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိပြီးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်များကိုမည်သည့်အနှောင့်အယှက်မှဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောဓာတ်မီး၏အခွံသည် ၀ န်ခံမှု၊ သံချေးမခံနိုင်ခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်များပါသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာအပြင်ပိုင်းဖြန်းခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။-သက်သေပြပြီးကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်။ LED ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ LED မီးလုံး၏လျှောက်လွှာအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်။
၁. ပေါက်ကွဲစေတတ်သော LED မီးလုံးများသည်ရေနံ၊ ရေနံဓာတု၊ သံမဏိ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊
3. IIA, IIB, IIC ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သင့်တော်သည်။
Post တင်ချိန်: Jun-03-2021